Forex အရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးဖြစ်ရတာ ဘာကြောင့်လန်းတာလဲ?
Forex ရောင်းဝယ်သူ? ဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်
ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ရခြင်းသည် သင့်ကိုလည်း ထူးခြားစေသည်ဟု ပြောကြသည်။ Forex အနေနဲ့တော့ ဒါလုံးဝမှန်ပါတယ်။ လူအများသည် ဒီကို အမြတ်နှင့် ငွေကြေးအောင်မြင်မှုအတွက် ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထို့ထက်ပိုရကြပြီး - သူတို့သည် လေးနက်ပြီး၊ အားကျစရာကောင်းသည့် အဖွဲ့အစည်း၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်လာကြသည်။ ထူးခြားတဲ့ကလပ်: ၎င်း၏သမိုင်းကြောင်း၊ ထင်ရှားသည့်အကြောင်းရာများ၊ ဟာသများနှင့် စာရင်းအင်းများ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ရသလိုပါပဲ။ သင်ဝင်လာသည့် ကလပ်အကြောင်း ဖတ်လိုက်ပါ - Forex ကလပ်!
Forex ဘယ်တုန်းက စတင်ခဲ့တာလဲ?
ပုံမှန်အချက်အလက်အနည်းငယ်နှင့် စလိုက်ရအောင်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ငွေကြေးလဲလှယ်ခြင်းသည် သမ္မာကျမ်းစာအချိန်တည်းကပင် ရှိခဲ့ပါသည်: ကုန်စည်များအား အခြားမြင်သာသည့် ပစ္စည်းများအတွက် ရောင်းဝယ်ကြသည်။ သို့သော် Forex ဈေးကွက်သည် ကျွန်တော်တို့သိထားသည့်အတိုင်း ၁၉၇၁မှစတင်ခဲ့သည်။
၎င်းသည် Forex အရောင်းအဝယ်အား အတော်လေးနုနယ်သည့်စီးပွားရေး ဖြစ်စေခဲ့ပေမယ့် ဘယ်လောက်လျှင်မြန်စွာပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်လာခဲ့သလဲ ကြည့်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပါ: ၂၀၁၇တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရောင်းဝယ်သူပေါင်း ၉.၆သန်းရှိခဲ့သည် - ၂၀၁၈တွင် ဤအရေအတွက်သည် ၁၃.၉သန်းထိ တိုးလာခဲ့သည်! ၎င်းသည် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏ လူဦးရေထက်ပိုကြီးပါသည်။
Forexမှာ နေ့စဉ်ငွေဘယ်လောက် ရောင်းဝယ်ကြသလဲ?
သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ လူနေထူထပ်သည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်၊ Forexတွင် အားကျလောက်စရာ နေ့စဉ်ဝင်ငွေရှိပါသည်။ ၃၉နှစ်တာတွင်၊ Forexမှာ နေ့စဉ်ရောင်းဝယ်ခဲ့သည့် ငွေပမာဏသည် ၁၀၂ ၀၀၀%ထိ တိုးခဲ့သည်! တစ်နေ့လျှင် ဒေါ်လာ ၅ဘီလီယံကျော်မှစ၍ ဈေးကွက်သည် ဒေါ်လာ ၅.၁ ထရီလီယံထိ သွားနေသည် - အထင်ကြီးစရာပဲ၊ ဟုတ်တယ်မလား?
Forexတွင် နေ့စဉ်ငွေပြန်ရမှု၊ ဒေါ်လာသန်းထောင်ပေါင်းများစွာ
Forexမှာ လူဘယ်လောက်များများ ရောင်းဝယ်နေလဲ သင်မြင်ပါတယ် - ဒါပေမယ့် ဒီလိုတိုးမြှင့်လာသည့် အကျိုးစီးပွားအတွက် အကြောင်းရင်းကဘာလဲ? အရောင်းအဝယ်တွင် အန္တရာယ်ရှိမှန်း လူတိုင်းသိပါသည်၊ သို့သော် လူအများသည် ဈေးကွက်အား သူတို့ဝင်ငွေအရင်းမြစ်၊ အပိုဆောင်း (သို့) အဓိကအဖြစ် ဆက်ရွေးချယ်နေကြသည်။ ဘာကြောင့်လဲ?
အထင်ရှားဆုံးအကြောင်းပြချက်မှာ လွတ်လပ်မှုဖြစ်သည် - ပြီးတော့ ငွေရှိခြင်းအကြောင်းတစ်ခုတည်းသာ မဟုတ်ပါ။ ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးမှာမဆို ငွေရနိုင်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သည်: ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးသည် အမှီအခိုကင်းသည်။ ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးတွင် သူဌေး (သို့) အလုပ်ခရီးစဉ်များ၊ သို့မဟုတ် စစ်ဆေးခြင်းများမရှိပါ၊ ရောင်းဝယ်သူသည် အလုပ်ဖြုတ်မခံရပါ၊ ရောင်းဝယ်သူသည် သူတို့အတွက်သာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ရောင်းဝယ်သူတ်စဦးသည် ရုံးဝန်ထမ်းတစ်ဦးလို့ တစ်နေ့ ၈နာရီအလုပ်လုပ်စရာမလိုပါ၊ ဒီ့အတွက် အလုပ်ထက် မိသားစုအတွက်၊ ဝါသနာများနှင့် အခြားသော လှုပ်ရှားမှုများအတွက် အချိန်ပိုပေးနိုင်ပါသည်။
အရောင်းအဝယ်သည် လူအများရှာဖွေနေတတ်သည့် - နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝနှင့် ငွေကြေးရေးရာနှစ်ခုစလုံးတွင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုကိုပေးသည်။ ပါဝင်ပတ်သတ်သူတစ်ဦးအတွက် လိုအပ်ချက်များမရှိပါ: သင်သည် မည်သည့်အသက်မဆိုဖြစ်နိုင်သည်၊ စတင်ရန် မည်သည့်ငွေပမာဏမဆို သုံးနိုင်ပြီး၊ ငွေကြေးအတွေ့အကြုံ သီးသန့်ကြီးမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ Forexသည် ကြီးပွားချင်သူတိုင်းအတွက် ဖွင့်ထားပါသည်၊ လေ့လာပြီး ဝင်ငွေရှာပါ။
Forexသည် သင့်စိတ်နှင့် ဝင်ငွေရှာနိုင်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ သင့်ဦးဏှောက်သည် သင်သွေးရမည့် ပထမဆုံးအရာဖြစ်သည်။ Forex ကဈေးပေါသလား? အမြဲမဟုတ်ပါဘူး။ ရှေ့ဆက်လေ ပိုများလေပါပဲ။ သင်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဖွင့်တာထက် ပိုပေါသလား? သေချာတာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ရောင်းဝယ်သူ၏ အမြတ်သည် မည်သူ့အပေါ်မှ မူတည်မနေပါ၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ်မှာသာမူတည်ပါသည်။ လူအများဈေးကွက်ကို လက်ဗလာနှင့် ဝင်ရောက်ပြီး၊ သန်းကြွယ်သူဌေးများဖြစ်သွားကြသည့် သာဓကများစွာလည်းရှိပါသေးသည် - အောင်မြင်မှု၏ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ထက် ဘာကပိုပြီး လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်မလဲ?
ပီတာ လင့်ခ်ျသည် စတော့ရှယ်ယာများ၊ Forex နှင့် ဈေးကွက်အကြောင်း ပထမဆုံးကြားတုန်းက ဂေါက်ရိုက်သမားလေးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ၏ပထမ စတော့ရှယ်ယာသည် သူ့အား $၇သာ ကုန်ကျစေခဲ့ပေမယ့်၊ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ၊ ထို $၇မှအမြတ်များသည် သူ့ MBA လေ့လာမှုများအတွက် ပေးရန်လုံလောက်ခဲ့သည်။ Magellan ရန်ပုံငွေမှာ လုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်း လင့်ခ်ျသည် ၁၃နှစ်အတွင်း အမြတ်အစွန်း $၁၈မီလီယံမှ $၁၄ဘီလီယံထိ မြှင့်တင်ရန်စီမံခဲ့သည်!
မိုက်ကယ် မားကပ်စ်သည် ပိုကြီးသော ကနဦးငွေပမာဏနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၂တွင် သူ၏ပထမခြေလှမ်းသည် သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးစုထားရသမျှ - $၇၀၀၀ ကုန်ကျစေခဲ့သည်၊ သို့သော် ခဏအတွင်းမှာပင် ၎င်းသည် $၁၂ ၀၀၀ ထိတက်သွားခဲ့သည်။ ၁၉၇၃အကုန်တွင်၊ သူ့မှာ $၆၄ ၀၀၀ရှိခဲ့သည်။ ခြုံပြောရသော်၊ အနှစ် ၂၀အတွင်း၊ မိုက်ကယ် မားကပ်စ်သည် $၃၀ ၀၀၀မှ $၈၀သန်းအဖြစ်ပြောင်းခဲ့သည်။
ရစ်ချက် ဒန်းနစ်သည် ၁၀နှစ်တာအတွင်း $၂၀၀ သန်းမှ $၄၀၀ထိ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အရောင်းအဝယ် လူသစ်လေးတစ်ဦးအနေဖြင့် စတင်ခဲ့ပေမယ့် ဈေးကွက်အဖွဲ့အစည်းထဲ ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ဝင်ရောက်ရန် နှစ်အနည်းငယ်သာကြာခဲ့သည်။ သူ့မိသားစုထံမှ $၁၆၀၀ ချေးငှားခဲ့ပြီး၊ $၁၂၀၀ဖြုန်းပြီးနောက် အမေရိကအလယ်ပိုင်း ကုန်ပစ္စည်းလဲလှယ်မှုတွင် နေရာတစ်နေရာရခဲ့ပြီး၊ အရောင်းအဝယ် မတည်ငွေအဖြစ် $၄၀၀သာကျန်ခဲ့သည်။
မှန်လား (သို့) မှားလား?
ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ - Forex အဖွဲ့အစည်းအကြောင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အနည်းငယ်ကို ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ ဘယ်တစ်ခုက မှန်လဲ သင်မှန်းနိုင်ပါသလား?